China Track Adjuster / Tensioner fekitori nevatengesi | Bonovo
Tevera Adjuster / Tensioner
Track aduster or tensioner inonziwo track adjuster cylinder iyo inoshandiswa kune vanochera uye mabhurldozers. Bonovo Track maadapteri anowanikwa kune ese mabhureki uye mamodheru ezvekuchera, Hitachi, Komatsu, Caterpillar uye mamwe marudzi evanocheka vanokambaira pamitengo yemakwikwi. Rungano rwekugadzirisa musangano rine chitubu chinopora, humburumbira uye joko.
Mashoko 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA
Waya dhayamita 5mm ~ 80mm
Hight yemahara 10mm ~ 1188mm
kuoma 45HRC ~ 55HRC
Kutungamira kwemakori Kurudyi kuruboshwe
Kwete yemakori Unlimited
Kushanda Excavator, digger muchina, mota, chitima, shakeout muchina, nezvimwe.
Ruvara Blackwhite, bhuruu, tsvuku, yero, pfumbu, nezvimwe.
Production nzira Hot yakaumbwa. Inotonhora yakaumbwa
Tarira Izvo zvinhu uye zvinyorwa zvinogona kugoverwa nevatengi.
Kugadzira / Dhizaini Dhirowa
Zvikamu: yakakwana track track adjuster gungano / chitubu inodzosera assy, ​​kana mumwe munhu anoidaidza idler idhiraina ine izvo zvinhu sekutevera
Komatsu: PC55, PC60, PC120, PC130, PC200-6, PC200-7, PC220-6, PC220-7, PC300-6, PC300-7, PC400, D31PX-21
Kobelco: SK120-3, SK200
Tensioner yemuchina wekuvaka zvakare inogona kunzi Kudzosera Chitubu Gungano.
Iyo ine hydraulic system, inodzosera chitubu uye zvikamu zvekubatanidza.
Exclusive chisimbiso boka rinovimbisa kuti hapana mafuta anodonhedza, ichipa yakatsiga mamiriro eiyo hydraulic system kune chero mamiriro ekushanda.
Iko kushandiswa kwe otomatiki muvira remoto-pamusoro pechigadzirwa mune chinotenderera muchoto wemagetsi choto kunogona kuita kupisa kwezvinhu zvakaenzanisirwa, semhedzisiro chitubu chakapedzwa chinoita kuti chigadzikane.
Kuedzwa: isu tine yakasimba mhando yemhando uye isu tinoteedzera yakaoma SOP kuenderera mhando yekutarisa
Tarisa Yako Yenhanho Tension Nguva Dzose
Shandura muchina kweinenge hafu yeawa kubvumira iyo track kuti iwirirane kune inoshanda nzvimbo usati watarisa uye kumisikidza iyo track tension. Kana mamiriro akachinja, sekuwedzera kunaya kwemvura, gadzirisa kusagadzikana. Makakatanwa anofanirwa kugara achigadziriswa munzvimbo yekushanda. Kusununguka kusanzwisisika kunokonzera kukwapura pakumhanya kwakakwira, zvichikonzera kuwanda kwemabhushi uye kupfeka kweshure. Kana iyo track yakanyanya kuomarara, inokonzera kushushikana pane iri pasi pemotokari uye kutyaira zvinhu zvechitima uku uchiparadza simba rebhiza.
Kukanganiswa kwetirakiti isiriyo kunogona kutungamira mukuwedzera kupfeka, saka zvakakosha kutevedzera kukakavara kwakakodzera. Semutemo wakajairika, kana vanoshanda vako vachishanda munzvimbo dzakapfava, dzine madhaka, zvinokurudzirwa kumhanyisa matraki zvishoma akasununguka.
"Kana masimbi esimbi akanyanyomira kana kusununguka zvakanyanya, inogona kukurumidza kumhanyisa kupfeka," "Nzira yakasununguka inogona kukonzeresa nzira."
Pashure: Track Guard
Zvadaro: Track Link
katsi yekuchera track tension
excavator idler adjuster
excavator njanji tensioner
komatsu excavator track tension adjuster
mini excavator track kukakavara